Khabiirka Kala Duwan: Waa Maxay Faa'iidooyinka SEO-ga ee Ganacsatada ah
SEO waa qayb muhiim ka ah istaraatiijiyada suuq-geynta, kaas oo u oggolaanaya bilawgaoo ay dhisteen shirkaduhu waxay kor u qaadaan adeegyadooda iyo alaabada. Cilmi baaris ayaa sheegaysa in 82% dukaamada ay qirayaan saameynta natiijooyinka raadintaiibsato go'aanka, iyo 70% ka mid ah waxay iibsadaan alaab ku salaysan natiijooyinka raadinta. Sidaa awgeed, aragtida waa arrin muhiim u ah ganacsiga
Jack Miller, Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Sare Adeegyada Dijital ah ayaa sharraxaya faa'iidooyinka SEO-yada siiya ganacsatada
1. Maaraynta Shahaadada
Heerarka iyo saameynta kowaad. Ujeedada maareynta jumladamarka aad ku jirto xukunka safka raadinta. Sidaa darteed, yoolka koowaad waa inuu ku daro astaantaada natiijooyinka raadinta ugu sareysa. Iyadoo lala socdo boggaHagaajinta, kanaalka warbaahinta bulshada ayaa sidoo kale kaa caawin kara inaad dhisato sumcad sumcad ah. Marka dadku soo galaan magacaaga astaantaada adigoo raadinayawaxaad ka heli kartaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan, xisaabaadkaaga warbaahinta bulshada ee ku qoran liiska natiijooyinka ugu sarreeya 6, sidaas darteed, xoojinta farriinta,taas oo shirkadaada ay jeclaan lahayd inay bixiso. Qorshayaashani waxay ka baxaan aragti wanaagsan oo ku saabsan macaamiisha la filayo.
2. Cilmi-baarista Muhiimka ah
Istaraatijiyadaha suuq-geynta iyo dhiirigelinta dhiirigelinta waxay inta badan ku xiran yihiinereyada muhiimka ah ee loo isticmaalo bogga internetka. Waxay ka caawisaa in la qaabeeyo doorbidka dadka isticmaala iyo in la hagaajiyo macnaha qoraalka ah ee bogga bogga iyo bogga soo degaya.Daraasad muhiim ah oo tayo sare leh ayaa kuu ogolaanaysa inaad abuurto quudin macluumaad ah isla markaana u suurtageliso macaamiisha inay wax badan ka bartaan badeecada ama adeegga. SidaNatiijada, waxaad ka heleysaa macaamiil farxad leh, maaddo ka fiican iyo darajo sare, taas oo ugu dambeyntii gaari wadida gaadiidkaaga.
3. Gaadiidka dabiiciga ah
Fikradaha wanaagsan, alaabooyinka, iyo adeegyadu waxay ku faafaan virally, iyo dhammaan sheekooyinkahareeraha waxa ku soo baxa natiijooyinka raadinta si ka fiican, kuwaas oo ka imanaya xiriirada soo galaya, tixraacyada iyo calaamadaha bulshada. Si loo helo maalgalin,ganacsatada waa in ay badbaadiyaan kartida ganacsiga ee horumarinta muddada-dheer..Gaadiidka dabiiciga ahi waa tilmaame weyn oo hadda ahiyo isbeddellada mustaqbalka, taas oo dib u soo celisa abaalmarin aad u weyn oo ganacsigaaga ah.
4. Advantageous Competitionous
Ololaha SEO waxay ka caawiyaan sidii ay uga gudbi lahaayeen tartamayaasha. Ganacsatadu waxay u baahan yihiinGanacsigooda ka baxsan tartankooda iyo hubi in farqiga u dhaxeeya iyaga iyo ciyaartoyda kale ee warshadaha ay sii ballaaraan xataasafka raadinta
Calaamadaha bulshada waxay sare u qaadaan sicirka sare ee raadinta dabiiciga ahgaadiidka lagu wado goobta. Wareegyada warbaahinta bulshada ayaa kaabaya kobcintaan, si ay muhiim ugu noqoto ganacsi kasta. Ganacsatada ayaa sii kobciyaololaha warbaahinta bulshada oo leh ololeyaal SEO ah oo xoogan.
6. Helitaanka Trust
Ganacsatada aan dhisnayn waxay helayaan kalsooni yar sababtoo ahAqoonsiga xadidan ee suuqa. Isticmaalayaasha waxay leeyihiin kalsooni badan goobaha si fiican ufilmaamaya ereyada ay doorbidaan. Heerka baadhitaanka dabiiciga ahhagaajinta goobaha loo yaqaan "site clicks" marka la barbardhigo natiijooyinka raadinta ee lacag bixinta Qiimaynta sarre ee makiinadahaas waxay ka caawiyaan shirkadaha cusub in ay is-dejiyaan naftoodaee suuqa oo indho-indheynaya dhagaystayaashooda bartilmaameedsanaya
7. Saameyn Soon Cadaal Ah
Samaynta sifo sumadeed mudo-dheer waxay u baahan tahay in lagu xiro SEOsida istaraatiijiyadeed sida ay kor u qaadeyso hawlaha internetka ee ganacsatada. Doolar kasta oo lagu qaato SEO wuxuu u tarjumayaa qiimaha muddo dheer.
SEO waa hawl wakhti badan leh, taas oo u baahan in badan oo ahkhayraadka Si kastaba ha noqotee, waa suuq-geyn dijitaal ah oo ku habboon kaas oo u adeega maalgashiga istraatiijiga ah ee muddada fog Source . Sida Sare Macaamiishu way cadeeyeen, SEO wuxuu ka caawiyaa ganacsatada in ay boodaan bilaabaan ganacsigooda, dhisaan kalsoonida iyo kalsoonida, sugaan maalgelinta, iyo hubinta inay sii socoto